10ka magaalo ee ugu quruxda badan Morocco | Safarka Absolut
Susana Maria Urbano Mateos | | La cusboonaysiiyay 12/07/2018 17:42 | Morocco
Midab buuxa, diirimaad iyo soo jiidasho leh, Marooko waxay qurxisaa quruxda, laga bilaabo buuraha Atlas ee ku fidsan waddanka oo dhan, oo leh bad buluug ah oo buluug ah oo ka soo horjeeda huruudda iyo dahabka ciidda lamadegaanka. Waddanku wuxuu kaloo hoy u yahay magaalooyin qurux badan oo aan tiro lahayn, mid walbana wuxuu ku darayaa muuqaal gaar ah iyo dhaqanka Marooko.
Waxaan la kulannaa a dal taariikh iyo dhaqan ka buuxo in aan ka heli karno gees kasta oo ka mid ah, iyo wixii ka sarreeya, magaalooyinkeeda ugu qarsoon. Hadaad raadineyso meelaha ugu quruxda badan ee la booqdo ama laga jaro Morocco, halkan waa liiskaaga kuugu habboon inaad la socoto.
Magaalo xeebeed qurux badan Xeebta waqooyi ee dalka, Asilah waxay leedahay taariikh hodan ah oo kaladuwan. Xididdadiisuna waxay soo jireen ilaa qarnigii XNUMXaad, markay ahayd dariiqa ganacsi ee ugu muhiimsan ee ay isticmaalaan Foosiyaaniyiinta, waxaa markii dambe qabtay Boortaqiiska kahor intaanay hoos imaan xukunkii Marooko qarnigii XNUMXaad.
Dhaqan kasta iyo bulsho kasta oo is xigta waxay ku reebtay raadkeeda magaalada, sidaas darteed maanta, Asiilah Waa bandhig soo jiidasho leh oo ku saabsan hiddaha gaarka ah ee Marooko. Qalcadda Boortaqiiska si aan sugnayn ayey ugu tiirsan tahay buuraha, halka guryo qurux badan oo cadaan iyo buluug ah oo reer Marooko ah ay hareerayaan jidadka.
Waxay ku taal meesha cajiibka ah Buuraha Rif ee woqooyiga Marooko; Chefchaouen ayaa caan ku ah guryaha buluuga ah kuna yaal hoyga cagaaran iyo bunni ahaanta buuraha dusheeda.
Magaalada biyo-mareenno hoos ah buuraha, heer kasta oo cusub oo daaha ka rogaya dhismayaasha ugu gaarka ah, dhirta midabada leh, iyo makhaayadaha qurxoon Qeybtii hore ee magaalada waxaa si xoogan u saameeyay Dhismaha Andalusia iyo islaamka, laga bilaabo darbiyada buluugga ah ee rinjiga ah iyo saqafyada dhoobada casaanka ah, illaa albaabbada muftaaxa leh ee albaabbada qaabeeya iyo marinnada laamiga ah ee magaalada dhexmara.
In kasta oo dhawaanahan ay caan ku ahayd ganacsiga iyo kororka dalxiisayaasha, Chefchaouen weli waa meel ku habboon oo lagu soo maro Marooko bikrad ah iyo mid gaar ah.
Waxay ku taal xeebta galbeed ee Marooko, hareeraha badda ee dhalaalaya iyo xeebaha bacaadka jilicsan, Essaouira waa mid ka mid ah sirta qarsoon ee Marooko, iyadoo inta badan ilaalinaysa dadka badan ee dalxiisayaasha qorraxda doonka ah sababo la xiriira xaaladaha dabaylaha wata. Marka laga reebo quruxda dabiiciga ah ee ku xeeran magaalada lafteeda Essaouira waxaa xusid mudan dhismayaasha indhaha soo jiita, sookiyada soo jiidashada leh, iyo dekedda mashquulka badan, oo ay ka buuxaan doomo midabo badan leh.
Laga soo bilaabo dekedda derbiyada magaalada ayaa kor uga kaca, hareeraha meelaha suuq midab leh ayaa laga soo bixiyaa, guryo cadcad iyo waddooyin wareegaya. Darbiyada magaalada ayaa sidoo kale ku faani aragti qurux badan oo ku xeeran, ka dhismooyinka isku dhafan ee magaalada ilaa Ujeeddooyin Jaale Meel fog.
Sida magaalada labaad ee ugu weyn Morocco, FesSi kastaba ha noqotee, wali waxay leedahay dhammaan soo jiidashada iyo dabeecadda magaalo aad u yar. Magaalada ayaa leh laba medinas oo qadiim ah, mid ka mid ah - fes el bali - Waxaa loo qoondeeyey inay noqoto Goob Hidaha Adduunka ah oo loogu talagalay dhismaheeda qaab dhismeedka adag, luuqyada, barxadaha, iyo sidoo kale jaamacadda ugu da'da weyn adduunka.
Magaalada guud ahaan waxay ku faantaa tusaalooyin badan oo aan caadi ahayn oo ku saabsan qaab dhismeedka islaamka, laga soo bilaabo waqtiyadii hore ilaa masaajiddo waaweyn, dhammaantoodna si qurux badan loogu qurxiyay dusiyo iyo arabsiyo, taasoo ka dhigaysa magaalada inay tahay matxaf hawada furan.
Ifraan waa mid kamid ah magaalooyinka ugu yaabka badan wadanka MarookoWaxay u egtahay magaalo Swiss ah oo buur ka badan magaalooyinkeeda cidlada ah iyo qaab dhismeedka Carabta. Bilicsanaanta casriga ah ee magaalada waxaa sabab u ah Gumeysiga Faransiiska, kaasoo magaalada u dhisay meel laga baxsado xilliyada kuleylaha kulul, Ifrane waxay ku taal buuraha Atlas iyadoo barafku da'o xilliga qaboobaha.
Iyo waliba kooxaysi soo jiidasho leh Jaziiradaha yurub-ka waxyooday, magaalada waxayna u taagan tahay jardiinooyinkeeda tirada badan iyo jardiinooyinka, taasoo abuureysa jawi farxadeed iyo xasillooni ku dhex jirta buuqa iyo rabshadaha nolosha Morocco.
Mid ka mid ah magaalooyinka ugu caansan Morocco, Marrakech waxay noqotay meel aan laga baxsan karin sanadahan dambe kuwa doonaya inay la kulmaan quruxda taariikhda iyo dhaqanka Marooko. Magaaladii hore waxay caan ku tahay suuqyo fara badan, oo leh hareeraha luuqyada iyo sooks-ka oo muujinaya khasnado cusub markasta - oo ay ku jiraan uunsi udgoon, dhar midab leh, laambado dhalaalaya iyo dahabka.
Muuqaalka ku hareeraysan magaalada hareeraheeda ayaa si isku mid ah u qurux badan, sida dooxada lamadegaanka oo ka soo fidaya magaalada, kuna raaxeysanaya qanacsanaanta buuraha Atlas ee barafka ka fog.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » 10ka magaalo ee ugu quruxda badan Morocco
5 jardiinood oo Marrakech ah oo ay tahay inaad ogaato